आजको राशिफल / २०७६ श्रावण २९ गते बुधबार पूर्णिमा व्रत, - Social Video Khabar
आजको राशिफल / २०७६ श्रावण २९ गते बुधबार पूर्णिमा व्रत,
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) :छातीको समस्याले स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ, हतारको निर्णयले अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा सजग रहनुहोला। समयमा जुट्न नसक्दा आफ्नो काम रोकिन सक्छ।
अरूका लागि उपयोग भइनेछ र बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। आवेशको व्यवहार र सानो असमझदारीले आफन्तजन टाढिन सक्छन्। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला।
परिस्थितिवश चिताएको काममा बाधा पुग्नेछ। आंशिक फाइदा भए पनि काम पूरा गर्न समय लाग्नेछ। अरूका लागि केही रकम र बुद्धिसमेत खर्चनुपर्ला। अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन्। बाध्यात्मक परिस्थितिले अलमल्याए पनि प्रयत्न गर्दा आंशिक फाइदा हुनेछ। तर अपिरिचित व्यक्तिको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ।
Prevजोरपाटीमा डेरा गरि बस्ने २५ वर्षकी शिलाले आफ्नै २४ वर्षीय श्रीमान जालमान स्याङ्तानको च*क्कु प्र*हार गरि ह*त्या (तलको भिडियोमा हेर्नुहोस)
Nextरक्षाबन्धनको दिन यी ६ राशीलाई हुदै छ फलीफाप, २०७६ साल साउन ३० गते बिहीबार का दिनको राशीफल हेर्नुहोस, माता पाथीभरामाईले हामी सबैको रक्षा गरुन
बाउ आमाले पढ्न पठाएको छोराछोरीको स्कुलको कुनामा यस्तो चर्तिकला ल हेर्नुस स्कुल पढ्ने छात्र-छात्राको चर्तीकला ! पढ्न छोडेर यस्तो मस्ती हेर्नुहोस ! हेर्नुहोस यो भिडियो=
रक्सिको नशामा नायिकाले पुलिसकै अघि कपडा खोलेर पुलिस कुटेको भाइरल भिडियो हेर्नुहोस
भ्यालेन्टाइन डेका दिन प्रेम साटिरहेका यी जोडीको अन द स्पोट जबर्जस्ति विवाह गराइयो ! (भिडियो सहित)
सुत्नु भन्दा पहिले एक पटक पढ्नुस आनन्द आउने छ